"PRESTIGE" KA SOO DUUDDUUBKA BARADHADA COLORADO: TILMAAMAHA ISTICMAALKA DAROOGADA - BARADHADA
Cayayaanka ugu weyn ee baradho ayaa weli ah baradho duqsiyo Colorado. Sannado badan, bannaanka ayaa isku dayaya in ay helaan aalad wax ku ool ah dagaalka ka dhanka ah. Dhammaan dadka maanta loo yaqaan, mid ka mid ah kuwa ugu fiican waa daroogada lafdhabarta ah. Waa maxay qalabkani iyo waxa uu yahay sifooyinka, waxaan sii sheegi doonnaa dheeraad ah.
"Prestige": faahfaahin, halabuurka iyo foomka sii deynta
Daroogadu waa ka-joojin xoog leh, taas oo lagu badhxo kala duwanaansho kala duwan, iyada oo ku xidhan habka codsiga. Qalabka wuxuu ka kooban yahay pentsikuron (150 g / l) iyo imidacloprid (140 g / l). Dhabarka waxaa loo yaqaan 'chloronicotinyls' - walxaha leh ficilka xiriirka degdega ah. Penticurone waa cayayaan dil ah oo loogu talagalay la dagaallanka cudurrada fangas. Sidaa darteed, "Prestige" ma aha oo kaliya sun ka soo Colorado baradho baradho, laakiin sidoo kale ah habka lagu dagaalamo infekshanka fungal ee dhirta.
Daroogadu waxay bilaabmaysaa in ay si firfircoon u dhaqanto sida ugu dhakhsaha badan ee maadada daaweynta ee lagu beeray dhulka. Thanks to qoyaanka, Prestige wuxuu ka dhaqaaqaa tuubada carrada ku hareereysan, abuurista halo badbaado ku wareegsan. Inta lagu jiro biqilka iyo koritaanka dushooda ee geedka nuugo qalabka, ku faafo unugyada oo dhan. Sidaa darteed, ilaalinta ka hortagga cayayaanka lepidopteran iyo cayayaanka xitaa waxaa lagu hayaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. "Prestige" ee looxa shaqeynayo baradho waxay ka caawisaa isla muddadaas si loo ilaaliyo dhirta laga soo saaro xayrta budada ah, xayawaanka madow, qolof, kalluun iyo cudurrada kale ee fungal.
Waa muhiim! Si loo hubiyo in daroogada ay leedahay saameynta ugu badan, waa in la isticmaalo dariska. Haddii sirqoolladaadu xiran yihiin, waxba way kala soocaan, deriska way diideen inay isticmaalaan, iyadoon loo eegin inta ay le'eg tahay dhulka, cayayaanka ayaa duulaya mar kale mar kale.
Intaa waxaa dheer, "Prestige" ee lagu shaqeynayo baradho waxay ka caawisaa dhirta si loo adkeeyo kuleylka xooggan, isbeddelka heerkulka, la'aanta ifafaale iyo xaalado kale oo walwal leh. Waxay kaloo xoojisaa koritaanka dhirta, waxay gacan ka geysataa samaynta noocyada digriiga.
Mabda'a daroogada iyo faa'iidooyinka isticmaalka
Qalabka wuxuu leeyahay laba qaybood oo firfircoon. Imidacloprid waxay la dagaallantaa cayayaanka. Qaadashada jirka ee cayayaanka, wuxuu saameeyaa nidaamka dareenka, xannibista isdhaafsiga ee dareenka, sababtoo ah cayayaanka waa curyaan ah oo dhinto. Penticurone waa suntan cayayaanka ah oo ah fungicide oo leh saameyn difaaceed oo dheer.
Ma taqaanaa? Faa'iidada daroogadu waa in aad ka shaqeyn karto digriiga mar ka hor beerashada, oo aanad u baahnayn inaad isticmaasho daaweynta lidka-kaneecada mar dambe. Hase yeeshee, maaha wax ka soo horjeeda dabka, inkasta oo waxbarashadu ay ballan qaadayso in meeshii dixirigtu aysan waxyeeli doonin digriiga.
Dad badan ayaa la yaabi haddii ay waxyeello u tahay baroosaska baradho ka hor inta aan laga beerin Prestige. Muuqaal muuqaal ah oo ficil ah ee qalabku waa in qaybaha ay ka mid yihiin ciidda iyo digriiga beerto u guurto geedka, isku uruursan caleemaha, laakiin ma soo noqdaan. Sidaa daraadeed, digriiga dhallinyarada ah ayaa wali nadiif ah daroogada. 53 maalmood ka dib daawaynta wax soo saarka, ma jirto haraaga diyaarinta lagu ogaado digriiga cusub. "Prestige" ee baradho, sida ku qoran tilmaamaha, si fiican u dagaallama cudurada fangas. Fikradaha la xiriirta Pentsicuron weli ma aha oo keliya baradho la beeray, laakiin sidoo kale ciidda ku hareereysan. Guryaha badbaadada ayaa la hayaa muddo laba bilood ah, qallafsanaanta dhaqaaluhu wuxuu soconayaa 40 maalmood kadib daaweynta ka dib.
Tilmaamaha isticmaalka daroogada "Prestige": goorta la shaqeynayo iyo sida
Sida laga soo xigtay tilmaamaha "Prestige" ka soo Colorato baradho Colorado loo isticmaali karaa in lagu hirgeliyo digriiga ka hor biqilka, kaliya ka hor beerto, iyo sidoo kale si loo ilaaliyo geedo.
Waa muhiim! Isku dar ah waa in la diyaariyaa maalinta codsiga oo si fiican u isku qasaan ka hor inta aan la xakameynin. Waxyaalaha wax lagu shaqeeyo 2 saacadood ka hor intaan la beeri.
Sida loo sharraxo "Prestige" ee geedi socodka baradhadu waxay ku xiran tahay sida aad u qorsheynayso in aad geeddi-socodka geedisocoto. Haddii ay lagama maarmaan tahay in la hirgeliyo wax soo saarka, qaad 50 ml oo ka mid ah ka-hakin, kaas oo lagu qasi karo saddex litir oo biyo ah. Qaddarkan waxaa lagu baari karaa 50 kg digriiga. Si arrintan loo sameeyo, waxay si siman ugu kala firdhisaa xaashida qalabka dusha ama filimka. Layer waa in aan ka sareeya saddex baradho. Kadibna waxaa lagu daboolaa xal ka timi buufin si uu tuber kasta u shaqeeyo ugu yaraan. Xaaladaha ba'an, ka dib qalajinta, baradhada ayaa loo rogi karaa oo laga baaraandegi karaa dhinaca kale. Tayada daaweynta waxay sidoo kale ku xiran tahay joogteynta shucaaca.
Waa muhiim! Su'aasha ah in ay suurtagal tahay in la barbar dhigo baradho la jarjaray oo leh "Prestige", ma jirto wax jawaab ah oo ku saabsan waxbarashadda, laakiin bannaanka u khibrad badan ayaa ka niyad jabinaya tan.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo boogaha iyo barandho yar oo kulul. Laba saacadood kadib, wuxuu diyaar u yahay inuu dego. Qalabka geedi-socodka ayaa loo wareejiyaa meesha dhulka lagu duubo bacda. Thanks to nidaamkan, wuxuu burburiyaa jeermisyo khatar ah, caabuq, waxay kordhisaa ilaalinta dhirta muddada uu biqilka.
Waxaad ka baari kartaa digriiga iyo ka hor biqilka, in ku dhowaad 10-15 maalmood. Tani waxay kor u qaadeysaa ilaalinta baradho ka soo duuduubka baradhada Colorado ka hor beerashada iyo xilliga beerashada oo dhan. Xaaladdan, ganaaxa waxaa lagu kala diraa qiyaas ahaan 30 ml oo ah diirada halkii 600 ml oo biyo ah. Waxaa sidoo kale laga buufiyaa dhalada buufin waxaana loo oggol yahay in la qalajiyo ka dib marka la shaqeynayo. Markaas baradho ku jiifsaday biqilka, iyo ka hor inta laga beerto, dib-u-marinta iyadoo loo eegayo mabda'a kor ku xusan.
Ma taqaanaa? Baradhada noocan oo kale ah ayaa lagu daaweyn karaa walxaha bayolojiga firfircoon iyo kormeerayaasha kobcinta. Baradho kasta waa in la shaqeeyaa ugu yaraan 90%. Laakiin waa lagama maarmaan in horay loo tijaabiyo si loola qabsado.
Daawada waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo geedo dalagyada kale ee khudradda. Sidee loola dhaqmi karaa "Prestige" si loo kariyo baradho kiiskan? Qaado 10 ml ee daroogada, kaas oo lagu qasi jiray 1 litir oo biyo ah. In qalab this xididdada geedo yihiin hoos u 8 saacadood. Markaas geedo waa laga saaray oo isla markiiba lagu beeray sariiraha. Xeerka macneheedu waa bilawga daaweynta ka dib.
Tallaabooyinka amniga marka la shaqeynayo daroogada "Prestige"
Daroogada ayaa iska leh fasalka saddexaad ee sunta. Taas macnaheedu waa in ay tahay waxyeello dadka. Sidaa darteed, kahor intaan la diyaarin ka-joojinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu ilaaliyo maqaarka gacmaha iyo habka neef-mareenka adigoo xiraya gacmo-gashi iyo caaryar. Inta lagu jiro buufinta daawada waa inay xirto koofiyad, dharka ilaalinta iyo maaskaro si loo ilaaliyo wejiga.
Waa muhiim! Horumarinta baradho ka hor beerashada "Prestige" ma baabi'inayso baahida loo qabo in laga isticmaalo mukhaadaraadka cayayaanka iyo cudurrada kale.
Moobeydu waxay lagama maarmaan u tahay cimilada xasaasiga ah isla markaana hubi in daroogadu aanay ka helin dhir iyo xayawaan kale. Inta lagu gudajiro nidaamka, ma cuni kartid ama cabi kartid, iyo sidoo kale inaad ku mashquuliso qiiqa sigaarka.
Dhamaadka daaweynta, dharka waa la saaraa, waxaa loo diraa maydhista, gacmaha iyo wejiga si fiican ayaa loo dhaqaa, dhuunta iyo naasofaryaha ayaa lagu dhaqaa biyo, qubaysana waa la qaadayaa. Ha ilaawin inaad si fiican u dhaqdo intaad ku jirto.
Dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka daroogada "Prestige"
"Prestige" oo ka soo duuduuban baradhada Colorado, sida ku cad tilmaamaha isticmaalka, gebi ahaanba ka baxo digriiga 50-60 maalmood. Sidaa darteed, waxay keli karaan oo kaliya hababka baradho ah ee u bislaadaan bisha Agoosto: dhexdhexaad ama dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Laguma talinayo in loo isticmaalo noocyada hore, tan iyo sunta ma yeelan doonto waqti ay ka soo baxaan digriiga.
Waa suntan daroogada waa daroogada ugu weyn. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo sidii munaasabaddeedii ugu dambaysay, markaan jirin wax kale oo gardarro ah oo waxyeello u geystay. Muuqaal kale oo aan fiicneyn oo daroogada ah waa in ay tahay qaali.
Laakiin guud ahaan, baradhada "Prestige" waxay leedahay saameyn wax ku ool ah oo aysan ku dhicin kuwa shaki ka qaba waxyeelladooda ama faa'idadooda. Dabcan, haddii la isticmaalo daawada asalka ah, oo aan been abuurin. Suuqa waxaa ka jira daawooyin badan oo tayo fiican leh oo leh qaab la mid ah iyo magac isku mid ah. Wuxuu u baahan yahay in la ogaado taas daroogada asalka ah waxaa soo saarey oo kaliya Bayer waxayna u qaybiyeen wakiillada rasmiga ah ee dalka. Calaamadda diyaargarowga waa inay ahaataa luqadda gobolka ee waddanka lagu fuliyo. Waa inuu lahaadaa liiska macluumaadka, oo ay ku jiraan sida loo xaliyo xalka saxda ah. Sidaa darteed, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in lagu iibiyo daroogada iyadoo la xaqiijinayo qodobbada khaaska ah.
Xaaladaha kaydinta iyo nolol maalmeedka sifooyinka kiimikada
Daawada waa in lagu keydiyaa baakadeeda asaasiga ah ee meel qallalan oo heerkulka heerkulkiisu ka hooseeyo -20 ° C ilaa +40 ° C. Meeshu waa inay noqotaa mid aan la gaari karin xayawaanka iyo carruurta. Cuntada, biyaha, quudinta iyo alaabta dab-demiska ah waa inaan loo dhaweyn. Waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan laba sano.
Bannaanka beeralayda ayaa sannado badan la halgamayay su'aasha ah sida loo daweeyo baradhada cayayaanka ka hor inta aan la beeri. Maanta, waxaa la siiyaa qalab waxtar leh "Prestige", taas oo kaliya ma baabi'in cayayaanka, laakiin sidoo kale difaaca geedka dhowr ka mid ah cudurada fungal. Waxay saameyn ma aha oo kaliya digriiga, laakiin sidoo kale dhaladooda, oo sidaas daraaddeed waxay leedahay saamayn adag, kordhin dhalidda ee baradho ah. Halista kaliya ee daroogada - fasalka saddexaad ee sunta. Waxaa loo isticmaali karaa oo keliya noocyada barafka ee xilliga dambe iyo kuwa dhexdhexaadka ah, maadaama ay ka timid dhirta ugu horreysa laba bilood ka dib. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad taxaddar yeelato markaad taabanayso waxyaabaha beerto, si aad u hoggaansanto tallaabooyin dhowr ah oo ilaalin ah. Intaa waxaa dheer, qiimaha daawada halkii weyn, waxaana jira khatar weyn oo lagu iibsado been abuur.